खेतमा भेटिएको रहस्यमय डल्लो फुस्काएर हेर्दा सबै आश्चर्य चकित « Naya Bato
खेतमा भेटिएको रहस्यमय डल्लो फुस्काएर हेर्दा सबै आश्चर्य चकित
काठमाडौँ, २१ असोज । खेतको एक कुनामा भेटिएको एक डल्लो फुस्काएर हेर्दा सनसनीपूर्ण खालासा भएको छ। अमेरिकाको एनटोनिया निवासमा यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा भएको हो। उक्त घर नजिकै एलियनको अड्डा भेटिएको दाबी गरिएको छ। एलियनलाई दोस्रो ग्रहको जीवका रुपमा लिइन्छ।
अमेरिकाको कार्लोसमा बस्दै आएका अर्जेन्टिनाका बुएनोस एरेसले उक्त डल्लो देखेका थिए। एक दिन आफ्नै खेलको नजिकै हिँडदै गर्दा उनका आँखा खेतमा भएको अनौँठो बस्तुमा ठोक्कियो। जुन अड्डा आकारको वस्तु माटोले पुरिएको थियो।
त्यसपछि अनुसन्धान कर्तालाई बोलाएर उक्त बस्तुको जाँच गर्दा रहस्य बाहिरीयो। उक्त बस्तु डायनोसर नभएर यलियनको अड्डा भएको पुष्टी भयो। एक्सपटेर्सको अनुसन्धानले उक्त बस्तु एक प्राचिन जीव भएको तथा जसको नाम ग्लिप्टोडोँ रहेको पत्ता लाग्यो। जो १५ हजार वर्ष पहिले दक्षिण अमेरिकामा पाइन्थ्यो। – एजेन्सी
मनोज र मीना बिच डिभोर्स हुनुको खास कारण यस्तो, ‘१ करोड १५ लाख दिएको छु’ मनोज
‘बिन लादेन’ को नेपाल कनेक्सन
खेल मैदानमा नै रोनाल्डो रगताम्मे, भिडियो भाइरल
विश्व नै तर्साउनेगरि चीनले गर्यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मिसाइलको सफल परीक्षण
नेपालले अाणविक हतियार निर्माण गरेमात्र भारत र चीनले नेपाललाई हेप्न छोड्नेछ – किम जोङ
सधैँ अरुलाई हसाउँने ‘वाऊ नेपाल’ की सोनीका बेस्सरी रुँदै गरिन यस्तो अनुरोध, भिडियो सहित
दुबईमा ३४ नेपालि अलपत्रबारेको समाचार झुठो हो !
मलेसियामा अवैध तरिकाले काम गर्दै आउनुभएका नेपालीहरुका लागि जरुरी सुचना
अधिकांश युवतीहरूले यौनका बारेमा सोंच्ने यी ८ कुरा
प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावलाइ नारायणकाजि द्वारा अस्वीकार, के थियो त्यो प्रस्ताव ?
कार्टुञ्ज क्रुजका सरोजसँग धमला पत्नी एलिजाको रोमान्स
ठुलो दुर्घटना बाट बालबाल बच्यो नेपालि सेनाको हेलिकप्टर
देशकै सबैभन्दा ठूलो अक्सिजन ग्यास प्लान्ट स्थापना